🥇 ▷ Bottleneck: Kaararka naqshadeynta cusub ee kumbuyuutarka PC? Ma mudan tahay? ✅
Bottleneck: Kaararka naqshadeynta cusub ee kumbuyuutarka PC? Ma mudan tahay?
Aynu qiyaasi karno in kombuyutarkaagu uusan hadda sii cusbooneyn, markaa waxaad bilaabeysaa fikirka: “Waxaan haystaa xoogaa lacag ah dhinaca. Waxaan doonayaa inaan iibsado kaararka naqshadeynta cusub! Waxaan hubaa in processor-kayga 2010 ilaali doono.“
Xaqiiqdii, kaararka sawirradu waa qaybta ugu muhiimsan ee PC halkaas oo shaqada ugu weyn ay tahay inay ka ciyaarto. Laakiin iibsashada kaararka garaafyada cusubi ma ka faa’iideysanayaan dakhligaaga? Processor-kaaga hadda ma awoodi doonaa inuu la socdo dhammaan ‘qalabka’ qalabka cusub?
Si looga jawaabo su’aashan, waxaa lagama maarmaan ah in la fahmo waxa dhalada la yahay iyo waxa dhaca marka saameyntani dhacdo.
Waa maxay Saamaynta Dhalada ama Dhalada? (Akhri wax dheeraad ah halkan)
Dhabar-jabku waa waxa dhacaya marka aad ku socodsiiso codsiyada kumbuyuutarkaaga, laakiin kuma guuleysan karto waxqabadka ay u noqon karto fikir ahaan awood u leh. Calaamadda saameyntani waa marka kaarkaaga sawirkaagu leeyahay astaamo aasaasi ah oo ka hooseeya celceliska moodhalka su’aasha la weydiinayo
Sidaa darteed, maadaama processor-ka iyo kaarka sawirraduhu ay ugu horrayn mas’uul ka yihiin waxqabadka ciyaarta… Oo kaadhka sawirraduhu uu cusub yahay, waxay khaladka ku noqon karaan oo keliya CPU!
Marka horeba, waxaa jira habab aad u fudud oo lagu fahmi karo waxa dhacaya.
Marka hore, la soco culayska (%) processor-kaaga iyo kaararka sawir-gacmeedka inta aad ciyaareyso. Marka, haddii si nasiib ah, boqolkiiba culeyska CPU uu sarreeyo (> 70%), laakiin kaararka naqshadeeyayaasha ayaa hooseeya (Markaa waxay u egtahay in processor-kuhu hoos u dhigayo nidaamkaaga oo dhan.
Maxaa dhacaya inta lagu jiro Dhalada?
Haddii aan u isticmaalno ciyaar PC tusaale ahaan, wareegga codsi caadi ah ayaa sidan u eg.
Marka la soo koobo, marka processor-ku uu culeys culus saaran yahay, way adkaan doontaa in la fuliyo wareegaan.
Tusaale ahaan, si loo gaaro 60fps caan ah. Processor-ka waa inuu gaaro ”Rendering Graphics”1/60 ee sekan ama ka yar.
Taasi waa, haddii processor uusan si dhakhso ah u samayn karin jidka, waxay ku gaari doontaa tallaabadan marar badan! Sidan ayaa kaararka sawirraduhu u taagnaan doonaan isagoo sugaya in CPU ku siiyo macluumaadka lagama maarmaanka ah!
Dhibaatadani waxay aad ugu egtahay wixii ka dhaca 8 da ‘yar oo qasiisooyin ah!
Markay wax badan ka dhacayeen shaashadda, caqliga ciyaarta wuxuu isku dayaa inuu diyaar noqdo 1/60 s. Si kastaba ha noqotee, haddii ay dhammaystiri kari weyday dhammaan howsha ka socota waqtigan daaqadda, 1/60 s kale ayaa la istcimaali lahaa, taas oo dhalineysa saameyn tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartam ah ah, haddii aaney dhammeyn karin howsha ka socota daaqaddan dhexdeeda, 1/60 s kale ayaa la istcimaali doonaa, taasoo dhalineysa saameyn dhaq-dhaqaaq tartiib ah gudaha ciyaarta lafteeda.
Tani waa sababta ay muhiimka u tahay in la helo nidaam isku dheeli tiran. Sidaan kor ku soo sheegay, kaarka sawirraduhu shaki la’aan waa qaybaha ugu muhiimsan ciyaaraha. Laakiin sidoo kale waa muhiim inaad haysato processor-raadiye la socon kara.
Isku day inaad wax baratid intii suurtagal ah ka hor intaadan PC-ga qaybo cusub ka iibsan… Waxaa laga yaabaa inaadan xitaa ku raaxeysan 20% waxa aad iibsaneyso.